Warsaxaafadeed: Ganacsigu wuxuu hoggaaminayaa waftiga Amsterdam si ay ugu soo bandhigaan METSTRADE qalabka badda lagu soo bandhigayo Nofeembar 15-17 - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Soosaarista Wararka: Ganacsigu wuxuu hogaaminayaa wafti ka socda Amsterdam si ay ugu soo bandhigaan METSTRADE qalabka badda soo bandhiga Nov. 15-17
Wefti uu hogaaminayo gobolka Washington ayaa markii ugu horaysay sameeyay, waxay raadinayaan inay suuq galiyaan Yurubta, suuqyada qalabka baddaha aduunka oo ay kujiraan shirkado casri ah oo Puget Sound ah Basta Boatlifts iyo Pure Watercraft..
Olympia, Wash - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay bilaabeysaa muuqaalkeedii ugu horreeyay ee rasmi ah ee gobolka METSTRADE, Bandhigga ganacsiga qalabka badda ee ugu weyn adduunka, ayaa berri ka dhacaya Amsterdam. Alaabooyin cusub oo loogu talagalay suuqa doonida madadaalada ee saldhigeedu yahay Bellevue Doonyaha Basta iyo Seattle ku saleysan Biyo nadiif ah wuxuu iftiimin doonaa joogitaanka “Dooro Washington” ee ku taal Barxadda Mareykanka Nov. 15-17. METSTRADE waxaa la filayaa inay soo jiidato 20,000 oo kaqeybgalayaal ganacsi oo ka socda 112 dal sannadkan, oo matalaya qaybaha waaweyn ee suuqyada badaha oo ay ku jiraan maraakiibta waaweyn, qalabka dhismaha iyo marinnada iyo seerayaasha doomaha.
Intaas waxaa sii dheer, Ganacsigu wuxuu bixiyay a Barnaamijka Ballaarinta Ganacsiga Gobolka (STEP) foojarka, oo lagu maalgeliyo Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Maraykanka, si loo caawiyo Nidaamka Smartplug iyada oo kaligeed soo bandhigaysa.
Warshadaha badaha ee Washington waa shabakad sii kordheysa, kala duwan oo isku tiirsan oo la xiriirta baahiyaha maanta jira. Shirkadaheena adag ee badaha, yar iyo weyn, waxay ku howlan yihiin aduunka oo dhan waxayna soo bandhigayaan xalal iyo alaabooyin lagu abuuray qiyamka hal-abuurnimo, tayo iyo dhaqano ugu fiican, ”ayuu yiri Joshua Berger, hogaamiyaha waaxda gobolka Washington Gov. Jay Inslee iyo agaasimaha horumarinta dhaqaalaha badaha ee Waaxda Gobolka. ee Ganacsiga.
Gobolka Washington warshadaha badda wuxuu ka kooban yahay 2,100 shirkadood, oo ay ka shaqeeyaan ku dhowaad 60,000 shaqaale ah oo soo saara in ka badan $ 15 bilyan oo ah dakhliga guud ee ganacsiga iyo $ 4 bilyan oo mushahar ah sanadkiiba. Xeebta gobolka oo ah 3,200 mayl xeeb ah, 50,000 mayl oo wabiyaal iyo durdurro ah, iyo marin toos ah oo loo maro marinnada maraakiibta ee Badweynta Baasifigga ayaa waxay taageereen taariikh badeed hodan ah. Shaqooyinka ka socda waaxda waxaa ka mid ah maaraynta xamuulka iyo saadka, kalluumeysiga iyo kalluumeysiga, dhisida markabka iyo doonyaha, dayactirka iyo dayactirka, howlaha maraakiibta rakaabka, doonyaha madadaalada, taageerada militariga iyo adeegyada taageerada iyo tikniyoolajiyadda badda.
“Waxaan ku faaneynaa inaanu u matalno Gobolka Washington iyo hal-abuurnimada Mareykanka warshadaha badda. Waxaa sii kordhaya xiisaha iyo dhaqdhaqaaqa suuqa Yurub waxaana rajeyneynaa inaan xoojino xiriiradaan, ”ayuu yiri Sam Basta, oo ah agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkadda Basta Boatlifts. "Waaxda Ganacsiga waxay gacan weyn ka geysatay ballaarinta ganacsigeenna dibedda iyo helitaanka ilaha cusub."
Shirkadaha kale ee fadhigoodu yahay Washington kuna soo bandhigaya si madax banaan bandhigga ayaa ah Nidaamka Badda Cas, Polyform Mareykanka iyo Ram Mounts.
Ganacsiga wuxuu bixiyaa adeegyo ka caawiya ganacsiyada yaryar inay ku ballaariyaan ganacsiga caalamiga iyo dhoofinta. Shirkadaha bandhiga ee waftiga sanadkaan waxay caawimaad kahelaan ganacsiga iyo shirkada qandaraaska kuleh qaarada yurub. Taageerada waxaa ka mid ah ka caawinta kor u qaadista wax soo saarkooda iyo adeegyadooda shuraakada mustaqbalka iyo kuwa wax iibsanaya.
Wax dheeri ah baro ku saabsan sida barnaamijyada kaalmada dhoofinta gobolka ay gacan uga geysato abuuritaanka fursado cusub oo suuq iyo iskaashi.
Raac wefdiga Gobolka Washington METSTRADE ee Amsterdam usbuuca soo socda barta twitter-ka @WAStateCommerce.
@WstateCommerceDooro Washingtonkaalmada dhoofintadhoofintaGanacsiga caalamiga ahJoshua Bergerqalabka baddawarshadaha baddaganacsiga yaryarWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Release News: Ganacsigu wuxuu hogaaminayaa waftiga MEDICA 2016 ee Dusseldorf, Jarmalka Nov. 14-17 War-Saxaafadeed: Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maal-gelinayaa in ka badan $ 1.9 milyan afar beel oo reer miyi ah →